Ninja She Devil (2006) mmsub
Ninja She Devil (2006)
လူမှနျရငျ ယောကျြားမိနျးမ ဘယျသူပဲဖွဈဖွဈ ဒှါရကိုးပေါကျပဲပါရှိကွတာပါ။ ဘယျသူ့မှာမြား ပိုပါနတော လြော့ပါနတောရှိလို့လဲပေါ့..။ ဒါပမေယျ့လို့ ထူးထူးခွားခွားပဲ ဂပြနျနငျဂြာကောငျမလေးတဈယောကျမှာ ဒှါရပေါကျတဈခု ပိုပါလာပါသတဲ့။ကြှနျတျောတို့ ရှုစားရမယျ့ ဇာတျလမျးကလညျး ဒှါရပေါကျတဈခု ပိုပါလာတဲ့( Tsubame)ဆူဘာမေ ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ ဇာတျလမျးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆူဘာမေ မှာ (Hayabusa) ဟာယာဘူဆာ လို့ချေါတဲ့ အကိုတဈယောကျရှိပွီးတော့ သူတို့ မောငျနှမနှဈယောကျစလုံးက (Kuniyoshi )ကူနိယိုရှိ ဆိုတဲ့ နယျစားကွီးရဲ့ လကျအောကျမှာ အမှုထမျးနကွေတဲ့ Shinobi (ရှိနိုဘီ) နငျဂြာမောငျနှမပါ။ တဈနမှေ့ာ ဆူဘာမေ အတှကျလြှို့ဝှကျတာဝနျတဈရပျထမျးဆောငျဖို့ ဖွဈလာရပါတယျ။ ဘာတာဝနျလညျး ဆိုတော့ အဝေးခရီးမသှားနိုငျတဲ့ နယျစားကွီး ကူနိယိုရှိ ရဲ့ လူသားမြိုးစေ့(သုကျသှေး) တှကေို သူမရဲ့ လြှို့ဝှကျထားတဲ့ ဆယျခုမွောကျ ဒှါရပေါကျကတဆငျ့ သူ့ကိုယျထဲသိုမှီးထားပွီး (၇)ညတာ ခရီးဆကျကာ တောငျတနျးတှရေဲ့ တဈဖကျခွမျးမှာနထေိုငျတဲ့ နယျစားကွီး ကူနိယိုရှိ ရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ Yamabuki (ယာမာဘူကီ)ရဲ့ သားအိမျထဲကို ထညျ့သှငျးပေးရမယျ့ တာဝနျပါပဲ။သူမရဲ့အကိုဖွဈသူ ဟာယာဘူဆာ ကိုယျတိုငျကလညျး ဆူဘာမကေို နယျစားကွီးဆီမှာ ပနျးဦးဆကျခိုငျးပွီးတော့ ဒီတာဝနျကို ထမျးဆောငျခိုငျးတာပါ။ တာဝနျက တာဝနျပါပဲတဲ့ ခငျဗြား………. ဆူဘာမနေဲ့ သူ့ရဲ့ ရညျးစားဦး (Taichi) ထိုကျခြိ…. ယောကျမဖွဈသူ (Kajero) ကာဂေးရိုး… နယျစားကွီး ကူနိယိုရှိ နယျစားကွီး ကတျော ယာမာဘူကီ တို့ရဲ့ ခဈြတငျးနှောထားတဲ့ မွငျကှငျးတှကေဖွငျ့ တခြို့နရောတှမှော ကွမျးတမျးခကျထနျလှနျးသလို တခြို့နရောတှမှောလညျး ညငျသာသိမျမှလှေ့နျးနတောကို ရှူစားရမယျထငျပါတယျ။သနားစရာအကောငျးဆုံးကတော့ ဆူဘာမေ ကိုယျတိုငျပါပဲ…..သူ့ခမြာတာဝနျနဲ့ဝတ်တရားကပြှေနျဖို့ ကွိုးစားရငျး စကွာဝဠာတံတိုငျး အပွငျဘကျကို ခေါကျတုနျ့ခေါကျပွနျ ကူးခတျနခေဲ့ရတာ အကွိမျကွိမျ အခါခါပေါ့…….. တောသူမလေး ဆူဘာမကေို အားလုံးပဲ သနားနကွေမယျထငျပါတယျ………။
လူမှန်ရင် ယောက်ျားမိန်းမ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒွါရကိုးပေါက်ပဲပါရှိကြတာပါ။ ဘယ်သူ့မှာများ ပိုပါနေတာ လျော့ပါနေတာရှိလို့လဲပေါ့..။ ဒါပေမယ့်လို့ ထူးထူးခြားခြားပဲ ဂျပန်နင်ဂျာကောင်မလေးတစ်ယောက်မှာ ဒွါရပေါက်တစ်ခု ပိုပါလာပါသတဲ့။ကျွန်တော်တို့ ရှုစားရမယ့် ဇာတ်လမ်းကလည်း ဒွါရပေါက်တစ်ခု ပိုပါလာတဲ့( Tsubame)ဆူဘာမေ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူဘာမေ မှာ (Hayabusa) ဟာယာဘူဆာ လို့ခေါ်တဲ့ အကိုတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ သူတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးက (Kuniyoshi )ကူနိယိုရှိ ဆိုတဲ့ နယ်စားကြီးရဲ့ လက်အောက်မှာ အမှုထမ်းနေကြတဲ့ Shinobi (ရှိနိုဘီ) နင်ဂျာမောင်နှမပါ။ တစ်နေ့မှာ ဆူဘာမေ အတွက်လျှို့ဝှက်တာဝန်တစ်ရပ်ထမ်းဆောင်ဖို့ ဖြစ်လာရပါတယ်။ ဘာတာဝန်လည်း ဆိုတော့ အဝေးခရီးမသွားနိုင်တဲ့ နယ်စားကြီး ကူနိယိုရှိ ရဲ့ လူသားမျိုးစေ့(သုက်သွေး) တွေကို သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ဆယ်ခုမြောက် ဒွါရပေါက်ကတဆင့် သူ့ကိုယ်ထဲသိုမှီးထားပြီး (၇)ညတာ ခရီးဆက်ကာ တောင်တန်းတွေရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ နယ်စားကြီး ကူနိယိုရှိ ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Yamabuki (ယာမာဘူကီ)ရဲ့ သားအိမ်ထဲကို ထည့်သွင်းပေးရမယ့် တာဝန်ပါပဲ။သူမရဲ့အကိုဖြစ်သူ ဟာယာဘူဆာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆူဘာမေကို နယ်စားကြီးဆီမှာ ပန်းဦးဆက်ခိုင်းပြီးတော့ ဒီတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခိုင်းတာပါ။ တာဝန်က တာဝန်ပါပဲတဲ့ ခင်ဗျား………. ဆူဘာမေနဲ့ သူ့ရဲ့ ရည်းစားဦး (Taichi) ထိုက်ချိ…. ယောက်မဖြစ်သူ (Kajero) ကာဂေးရိုး… နယ်စားကြီး ကူနိယိုရှိ နယ်စားကြီး ကတော် ယာမာဘူကီ တို့ရဲ့ ချစ်တင်းနှောထားတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကဖြင့် တချို့နေရာတွေမှာ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်လွန်းသလို တချို့နေရာတွေမှာလည်း ညင်သာသိမ်မွေ့လွန်းနေတာကို ရှူစားရမယ်ထင်ပါတယ်။သနားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ ဆူဘာမေ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ…..သူ့ခမျာတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကျေပွန်ဖို့ ကြိုးစားရင်း စကြာဝဠာတံတိုင်း အပြင်ဘက်ကို ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် ကူးခတ်နေခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါပေါ့…….. တောသူမလေး ဆူဘာမေကို အားလုံးပဲ သနားနေကြမယ်ထင်ပါတယ်………။
Link - http://bc.vc/7LUBqjp